Automdị akpaaka nke ire ahịa, ihe ịma aka, na ihe ịga nke ọma | Martech Zone
Holger Schulze na ihe niile teknụzụ teknụzụ teknụzụ duziri nyocha nke ndị ahịa B2B na B2B Azụmaahịa Ntanetị na LinkedIn.
Ajụrụ m Troy Burk, CEO nke Right On Interactive - a ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu nke ahụ achọpụtara dị ka onye ndu na ụlọ ọrụ - iji nye nzaghachi na nsonaazụ nyocha ahụ.
Emechara nyocha ahụ nke ọma ma nye ụfọdụ ezigbo usoro maka etu otu ndị ahịa B2B si enyere onwe ha aka akpaaka. Kudos ka Holger na otu ndị dọtara nke a. N'ime nzaghachi 909, imirikiti ndị na-aza ya sitere na ngwanrọ, teknụzụ dị elu na ụlọ ahịa na-erughị ndị ọrụ 100. Maka ụlọ ọrụ ndị dabara n'ụdị a, anyị ahụla ụdị ọnọdụ ahụ, ihe mgbochi, na ebumnuche. Companieslọ ọrụ ndị a na-arụsi ọrụ ike iji nweta ndị ahịa ọhụụ, ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee, yana obere ego ha na-arụ ọrụ. Imirikiti na-elekwasị anya n'ọgbọ ndu, ọnụahịa bụ ihe dị mkpa, na mmụba ROI dị mwute ikwu na ọ bụ nzaghachi mkpọsa (emepe ma pịa-thrus).
Azụmaahịa Azụmaahịa mere nke ọma na-enweta nkwụghachi ego ka ukwuu, mmekọrịta ndị ọzọ na-etinye aka, ịrụ ọrụ nke ọma karị, na ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa dị mkpa ma na-akwụghachi ụgwọ.
Na mgbakwunye, Troy kwuru na ebe ndị nnata kwuru maka mmefu ego na nyocha niile mana ihe karịrị ọkara, 57%, gosipụtara ịdị irè site na imeghe ma pịa site na ọnụego. N'otu oge, 37% kwuru na mmefu ego bụ nnukwu mgbochi ma nwee olile anya maka azịza ndị ọzọ adịghị ọnụ. Ọ na-ajụ ajụjụ ma ma ndị ahịa ma ọ bụ na-atụle usoro nhazi akpaaka ahịa ha n'ụzọ ziri ezi. Ikwesighi iguta usoro ahia ọ bụla dabere na ego… ị kwesịrị ịtụ ahia akpaaka ego dabere na nloghachi!
Ọ bụ akara ala dị egwu: Ndị nnata chọrọ ka ndị ọzọ na-eduga, azịza ahịa ahịa na-adịghị ọnụ, yana mmefu ma ọ bụ mmefu ego maka azụmaahịa azụmaahịa. Ha na-atụle ọganiihu na mmeghe na pịa-site na ọnụego.
Tags: b2bahịa b2bakụrụngwa ahịaahịa akpaaka ahịaahia akpaaka egoahịa akpaaka ahịalaghachi azụmaahịalaghachi na ntinye ego ahianri na mmekọrịtatroy burk